Mizzima TV Weekly, Business News No . 17 (04 May, 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No . 17 (04 May, 2013)
ဒီကနေ့ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ILO အဖွဲ့အစည်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လို တုန့်ပြန်လာပြီလဲ၊ ဆန်ကာတင်ရွှေးချယ်ခံထားရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပေးသွားမှာလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံအအတွင်း အမေရိကန်ရဲ့ FORD ကားတွေ ရောက်လာတဲ့အကြောင်း အပါအ၀င် တခြား စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။